DAAWO SAWIRO:- Ciidamada Tababar ku Saabsan ka Hortaga Qaraxyada Loogu Soo Xiray Degmada Buula Burde – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRO:- Ciidamada Tababar ku Saabsan ka Hortaga Qaraxyada Loogu Soo Xiray Degmada Buula Burde
Hiiraan Xog, Apr 19, 2018:- Saraakiil ka tirsan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ka socda dalka Jabuuti ayaa tababar ku saabsan ka hortagga qaraxyada ugu soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda magaalada Buula Burde ee gobolka Hiiraan.
Tababarkan ayaa loo qabtay 30 askari oo ka tirsan ururka saddexaad ee guutada shanaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Hiiraan, waxaana lagu baranayay qaabka looga hortago qaraxyada.
Guddoomiyaha degmada Buula Burde Cabdi Daahir Guure ( Karoore) saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa ka qeyb galay munaasabadda tababarkan lagu soo xirayay.
Taliyaha Ciidamadan ururka saddexaad Col. Cabdullahi Bare ayaa sheegay in waxyabaha ay barteen ciidamada ay ugu adeegi doonaan shacabka si looga hortago weerarada qaraxyada ee ay geystan kooxda Al shabaab.
Col Xaamud oo ka tirsan saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa sheegay in markaste ay diyaar u yihiin inay garab siiyaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Guddoomiyaha degmada Buula Burde Cabdi Daahir Guure ayaa tilmaamay in tababarkan uu wax badan ka badali doono khatarta, ay kala kulmaan ciidamada iyo shacabka argagixisada Al shabaab isagoo u mahad celiyay hogaanka ciidamada AMISOM oo tababarkan bixinayay.
“Tababarkan maanta aan u soo gaba gabeynay ciidamadan wuxuu wax badan ka badali doonaa khatarta kooxda Al-Shabaab ay la beegsadaan dadka shacabka ah iyo ciidamada deegaanka ku sugan, waxaan u mahad celinayaa saraakiisha ciidamada AMISOM oo tababarkan naga saaciday xili aan baahi badan u qabnay” ayuu yiri guddoomiyaha Buula Burde.
Tababarkan ku saabsan ka hortaga qaraxyada ayaa ku soo aadaya xili dhowaan duleedka magaalada Buula Burde qarax lagu aasay uu galaftay nolosha in ka badan todobo ruux oo isku qoys ahaa.